भारतले दमन गरेको छैन- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
भारतले दमन गरेको छैन
शुक्रबार प्रकाशित ध्रुव कुमारको ‘गहिरिँदो कश्मीर संकट’मा भारत सरकारले कश्मीरमा दमन गरेको उल्लेख गरेका छन्  ।
के बंगलादेशमा पाकिस्तानले गरेको दमनजस्तो त्यो छ ? त्यहाँका पसल नखुलेका आतंककारीको ‘थ्रेट’ले हो, नकि भारतको दमनले । यसै सन्दर्भमा लेखकले तिब्बतको दमनबारे पनि बोलिदिनुपर्ने थियो । तर लेखकलाई भारतको विरोध गर्नुछ, चीनको होइन । भारतको विरोध शक्तिराष्ट्र चीनले कुन आधारमा गर्ने ? भारत पाकिस्तानसँग जुहारी खेल्दैछ भनी लेखेका छन् । पाकिस्तानले भारतसँग जुहारी खेलेको छ कि भारतले पाकिस्तानसँग ? भारतले कश्मीरका नेता र जनतासँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने लेखकको भनाइ सही छ । लेखकले आतंकलाई नै कश्मीरी जनताको मुक्तिको संघर्ष ठान्नु गलत हो ।
राष्ट्रहित प्रतिकूल प्रस्ताव
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाली कांग्रेसले राखेको बटमलाइन असमान हुनुका साथै राष्ट्रहित विपरीत पनि छ  ।
आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत ११ नेताले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा २०६३ को अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था आफूहरूको बटमलाइन हुने बताएर राष्ट्रियताप्रति शंका उब्जाउने काम गरेका छन् । अन्तरिम संविधानमा विदेशबाट विवाह गरी नेपाल आएका चेलीलाई विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चाल्नासाथ नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने लेखिएको छ । जुन असमान र राष्ट्रहित विपरीत छ । भारतले भने नेपाली चेलीलाई आफ्नो नागरिकता दिन ७ वर्ष लगाउँछ । जसरी नेपाल–भारत बीचको सन् १९५० को सन्धि असमान छ, त्यसरी नै विदेशी बुहारीको सम्बन्धमा नेपाल–भारत बीचको व्यवस्था पनि असमान छ । यसलाई समान बनाउन नागरिक स्तरबाट धेरै आवाज उठे पनि नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको अनुचित अडानका कारण आजसम्म समान हुनसकेको छैन । यसपाली समान बनाउन खोज्दा कांग्रेसले मधेसको भोट बैंकको कारण नाजायज अडान राखिरहनु ठीक छैन ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:५०